नेपाल समुह र भालुको कम्पारो ! |
गृह पृष्‍ठ खबर नेपाल समुह र भालुको कम्पारो !
नेपाल समुह र भालुको कम्पारो !
प्रकाशित मिति : २०७८ जेष्ठ २५ , मंगलवार ०८:०७
वि.सं. २०३७/०३८ सालतिरको कुरा हो । त्यो ताका हामी अर्घाखाँची जिल्लाको साविकको ढाकावाङ गाबिस हाल भुमिकास्थान गाउँपालिकामा बसोबास गर्दंथ्यौँ । मैले प्रारम्भिक शिक्षा श्री विश्व मावि पिपलनेटामा गरेँ । त्यो ताका विद्यार्थीहरु प्राय बिहानको समयमा घरको काम गर्ने र बेलुका आफुसँग मिल्ने साथिसँग दिउसो पढिएका कुरा लेख्ने र घोकेर कण्ठ पार्ने पर्चलन थियो । हाम्रो घर अर्जुन देखि करिब १ किलोमिटरको यात्रा गरेर बेलुकी डाँडापोखरी स्थित कमल खनालको घरम पुग्दथेँ । हामी उमेरका हिसाबले १७ दिनको जेठो कान्छो थियौँ तर नाताको हिसाबले बाबु छोरा पर्दथ्यौँ । समग्रमा हामी साथिहरु नै थियौँ ।
हामी दुबैका बुवाहरुका बिचमा पनि अत्यन्तै घनिष्ट, सुमधुर र लोभलाग्दो दोस्ति थियो । बुवाहरुको त्यही सम्बन्धहरुको जगमा हामीहरुको पनि दोस्ति दिन प्रतिदिन प्रगाढ बन्दै गएको थियो । त्यो ताका हाम्रा कापि कलम अलग अलग भए पनि किताब भने सामुहिक किन्दथ्यौँ र सामुहिक नै अध्ययन गर्दथ्यौँ । त्यो ताका गाउँमा बिजुली बत्ति थिएन , मट्टीतेलको सहाराले हामी रात्रिकालिन अध्ययन गर्दथ्यौँ । कमल खनालको बुवा कृष्णप्रसाद खनालले कहीले काँही मट्टीतेल जुटाउन सक्नुहुने थिएन त्यो कारण हाम्रो अध्ययन अबरुद्ध हुन्थ्यो, त्यो कारण हामीलाई खिन्न देखेर उहाँ पनि चिन्तित हुनुहुन्थ्यो । हामी दुवैको मनोविज्ञान र मनोदशा बुझ्ना धेरै माहिर भएकाले त्यो अवस्थामा विभिन्न प्रकृतिका दन्त्य कथाहरु सुनाएर उत्साहित बनाउने गर्नुहुन्थ्यो । ती थुप्रै दन्त्य कथाहरु मध्ये एउटा कथा यस्तो थियो :
एकादेशमा एउटा मूर्ख र दुष्ट मानिस बस्दथ्यो । त्यो मानिसले गाउँमा कसैलाई पनि इज्जत र सम्मान गर्दैनथ्यो । आफूले आर्जन गरेको छिपछिपे ज्ञानको आधारमा सर्वसाधारमाथि शोषण, दमन, अन्याय र अत्याचार गर्दथ्यो । एक दिन उसको अत्याचारबाट वाक्क दिक्क भएर गाउँलेहरुले उसलाई घेराबन्दी गरी गाउँबाट नै लखेट्ने निर्णय गरे । त्यो निर्णयको अग्रीम चाल पाएको उक्त फटाह मानिसले तत्काल गाउँ छोड्ने र मुग्लान तिर पस्ने निर्णय गरेछ । सोही दिन नै विभिन्न भिरपाखा, डाँडाकाडाँ, खोलाकुन्दरा हुँदैँ अनकन्टार झाडीको बाटो हुदैँ मुग्लानतिर पसेछ । हिड्दै गर्दा झाडिको बिचमा सिकारमा खोजीमा रहेको भोकै प्यासै एउटा भालु लुकेर बसेको थियो । उक्ता मानिस देख्दा वित्तिकै सो भालु झम्टिहाल्यो । भालुको लगातारको आक्रमणबाट रगताम्य र लहुलुहान भएपछि उसका सबै कपडा च्यातिए । रेल र बसको टिकट तथा बाटोमा खाजा खर्च भनेर ऋण खोजेर गाउँबाट ल्याएको सबै रुपियाँ/ पैसा सडकमा छरपस्ट पोखियो । भालुको लटा छोडौँ भालुले एकै गास बनाइहाल्छ, नछोडौँ भालुसँगको भिडन्तमा थिलोथिलो भएर लखतरान परिसक्यो । उ यतिबेला के गरौँ के नगरौँ विलखबन्धमा परिसकेको थियो ।
यस्तैमा एकजना मुग्लान जान हिडेका अर्काे मानिस टुप्लुक्क त्यही ठाउँमा आईपुगेछन् । भालुको लटा समातेको मानिस, दोहोरो भिडन्त, रगताम्य र लहुलुहान भएको विभत्स दृश्य, सडकमा छरपत्र यत्रतत्र छरिएको रुपियाँ र पैसा, च्यातिएका कपडा यो सबै देखेपछि भर्खरै मात्र पुगेको मानिसले पहिलोलाई भनेछन,– भाईसाहेब यो के गरेको ? पहिलोले अण्डरस्पोर्ट नयाँ जुक्ति निकाल्यो र भन्यो –देखिरहेको छैनस् मैले भालुबाट रुपियाँ र पैसा छेराईरहेको छुँ । दोस्रो मानिसले मनमनै सोच्यो, मुग्लान गएर साहु महाजनको भाँडा माझेर, मालिक्निका साडी धोएर, वर्षाै दुख पाएर केही रुपियाँ लिएर फर्किनु भन्दा किन एक्छिन भालु नछेराउँनु ! उसले पहिलोे मानिसलाई भनेछ– हजुरले एकछिन आफ्ठेरो मान्नुहुन्न भने मलाई पनि एकछिन भालु छेराउने अवसर दिनुस न । पहिलो ले भन्यो– त्यो कुरा ठिकै छ । तिमीले भालु छेराउन चाहान्छौ भने शरिरका सबै कपडा खोल, झोला र पैसा सबै एकठाउँमा पोको पारेर राखेर यहाँ आउ र भालुका लटा राम्रो सँग समात तर एउटा कुरा भने ख्याल गर, तिमीले जति बलियो गरि भालुका लटा र कम्पारो समाउँछौँ, यसले त्यति धेरै रुपियाँ छेर्छ । यति भनेपछि दोस्रोले फटाफट कपडा खोलेर फटाफट भालुको लटा र कम्पारो समात्न आईपुग्यो ।
मुक्ति र मृत्युको दोसाँधमा रहेको पहिलो फटाहले भुँईमा खसेको सबै पैसा उठायो । दोस्रो मानिसका लुगा, झोला र पकेटमा भएको सबै रुपियाँ गन्यो र हेर्दा हेर्दै रफुचक्कर भयो ।
भालुले छेर्ने कुरै थिएन । नरभक्षिं भालुसँग लड्दा लड्दै लालची मानिसले मृत्युवरण ग¥यो ।
त्यो बेलाको दन्त्य कथा नेपालको राजनितिक परिस्थितिसँग मेल खाँदै गईरहेको देखिएको छ । हाम्रो मुलुकका प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली यतिबेला शक्ति, पद र पैसाको लालचमा परेर वैदेशिक नरभक्षिं भालुको चंगुलमा फँसेर रगताम्य, लहुलुहान र एक्लै भएका छन । उनीमाथि आईपरेको संकटबाट छुटकारा पाउन ठाकुर र महातोले साथ दिए पनि त्यसले नपुगेर उनले अस्ति मध्येरातमा नेपाल समुहलाई समेत ताकेर ६ फायर खोलेछन र भनेछन् – देउबालाई लगाईदिएका र आफुले लगाएका सबै कपडा फुकालेर नाङ्गै भएर आउ ! सबै मिलेर भालु छेराम् । नेपाल समुहले पनि भालु छेराउने की ?
पछील्लो पोस्ट कामचलाउ सरकारले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नु संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट
अगिल्लो पोस्ट ‘सरकार कर्तव्य पूरा गर्न चुकेका कारण जनताले निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्न सुरु गरे’
श्रीलंका विरुद्धको एकदिवसीय सिरिज इङ्ल्यान्डलाई